Eze 9 | Shona | STEP | Ipapo akadanidzira munzeve dzangu nenzwi guru, achiti, "Swededzai vatariri veguta, mumwe nomumwe ane nhumbi yake yokuparadza muruoko rwake."
1 Ipapo akadanidzira munzeve dzangu nenzwi guru, achiti, "Swededzai vatariri veguta, mumwe nomumwe ane nhumbi yake yokuparadza muruoko rwake." 2 Zvino tarira, varume vatanhatu vakabva nenzira yesuo rokumusoro, riri kurutivi rwokumusoro, mumwe nomumwe ane zvombo zvake muruoko rwake, nomumwe murume pakati pavo akafuka mucheka werineni, ano runyanga rweingi rwomunyori pachiuno chake. Vakapinda, vakandomira parutivi rwearitari yendarira.
3 Zvino kubwinya kwaMwari waIsiraeri kwakanga kwakwira kuchibva pakerubhi, pakwakanga kuri, kukasvika kuchikumbaridzo cheimba; akadana murume akanga akafuka mucheka werineni, akanga anorunyanga rweingi rwomunyori pachiuno chake.
4 Jehovha akati kwaari, "Pfuura napakati peguta, napakati peJerusaremu, uise chiratidzo pahuma dzavanhu vanogomera nokuchema pamusoro pezvinonyangadza zvose zvinoita mukati maro."
5 Asi kuna vamwe wakati, ini ndichizvinzwa, "Pfuurai nomuguta muchimutevera, muuraye; ziso renyu ngarirege kupembedza, musava netsitsi; 6 urayai vose vatana namajaya nemhandara navanana navakadzi; asi regai kuswedera kunomumwe anechiratidzo; mutange panzvimbo yangu tsvene." Ipapo vakatanga navatana vakanga vari pamberi peimba.
7 Akati kwavari, "Svibisai imba, muzadze mavanze navakaurawa; chibudai." Vakabuda, vakauraya muguta.
8 Zvino vakati vachiuraya, ini ndasiyiwa ndiri ndoga, ndikawira pasi nechiso changu, ndikachema, ndichiti, "Aiwa, Ishe Jehovha! Ko munoparadza vose vakasara vaIsiraeri pakudurura kwenyu hasha dzenyu pamusoro peJerusaremu here?"
9 Ipapo akati kwandiri, "Zvakaipa zveimba yaIsiraeri naJudha zvakakura kwazvo, nyika izere neropa, neguta rizere nezvisakarurama; nokuti vanoti, `Jehovha akabva panyika, Jehovha haaoni. 10 Neni, kana ndirini, ziso rangu haringapembedzi, handingavi netsitsi, asi ndichauyisa zvavakaita pamisoro yavo.' "
11 Zvino tarira, murume akanga akafuka mucheka werineni, akanga anorunyanga rweingi pachiuno chake, akadzoka neshoko, akati, "Ndaita sezvamakandirayira."